OMN: Turtii Hoggantoota Paartii KFO waliin( Caamsaa 14, 2019 ) Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN: Turtii Hoggantoota Paartii KFO waliin( Caamsaa 14, 2019 )
Kun Dhugaa Taanaan: Hiree WBO irratti Haasawi Yoo Deeme #WBO fi Mootummaa Gidduutti Ta’uu Qaba.
KFO, OPDO fi #ABOn wal Haasa’uufi kan jedhu odeeffamaa jira. Waan kuni xurii, huuba, daba, cubbuu fi wal irratti hojjechuu of keessaa qaba. Keessattuu yeroo mootummaan OPDO jeeqamaa fi waraanaan injifatamaa jirtuu fi yeroo Nafxanyaan Amhaaraa olaantummaa isaanii guutummaatti diriirsanii Oromummaa balleessuuf fiigan kana haasaa paartii OPDO waliinii ija shakkiin kan ilaalamuu qabuu dha.
Hoogganni ABO Finfinnee jiru MARFAMA keessa jira. Diinaan marfamee to’atamaa fi sossodaachifamaa jiraata. Security’n isaa amansiisaa miti. Kanaaf waan Tarsiimoo Qabsoo fi Hiree WBO irratti ejjennaa qajeelaadhaan falamuuf ‘negotiation power” hin qabu. Akkuma yeroo darbe sana mala Jawarfaan araara jedhanii Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa dirqisiisanii Ibsa Gaazexaa kennuu fi Xalayaa ofii barreessanii akka mallatteessuuf dirqisiisuun ammas ni jiraata!
YAADA Hooggana ABOf Akeeknu!
Maqaa paartiilee Oromoo walitti fidnaan kan Leencoo Lataafaa (OPDO irra illee Diina qabsoo Oromoo guddicha kan ta’e) ABOn diduu hin qabu. Waan WBO fi hiree WBO ilaalu garuu ABOn takkaa keessa seenuu hin qabu. Waan WBO akka mootummaan WBO waliin fixatuu qabu itti himuu qaba. Kunis jeequmsaa fi daba OPDO, mootummaa fi Lukkeeleen akka Jawar+Baqqalaa Garbaa+ Bayyanaa Sanbatoo hojjetaniin akka hariiroon ajaja waalta’aa WBO waliin waan citeefi fi WBOn High Command mataa isaa tolfatee waan jiruuf sana WBO waliin akka fixatan itti himuu dha. Hoogganni ABOs akka fedhe yoo waan dantaa Oromoo tuquu fi hiree fi nageenya WBO gaaga’u yoo dabarse WBOn akka irraa akkuma kanaan duraa hin fudhatne beekuu qaba. Hoogganni ABO aaanii lammataa irra ammuma irraa sana keessa seenuu lagachuu qaba.
Ejjennoo WBOf Akeeknu::
(1) WBOn amma qaama walaba tohannaa diinaa jala hin jirree dha. Dantaan ummata Oromoo WBO fi sochii qajeelaa inni godhu irratti rarraati. Eenyu illee har’a WBO caalaa kan dantaa Oromoof dhaabbatee jiru hin jiru. Kaan sodaa kaan ammoo (OPDOn) nafxanyootaaf kan ergamaa jiranii dha. Kanaaf waan dantaa fi tarsiimoo qabsoo tuqu fudhachuu hin qabu.
(2) Kaayyoon ABO hiree murteeffannaa Oromoo ti. Karaa fedhe kan kaayyoo kana maqsu diina isaa dhiisii hooggana ABO irraa illee WBOn fudhachuu hin qabu.
(3) Haasaan yoo ni deemsifama ta’e bakka Jilli WBO argamu BIYYA Alaatti deemsifamuu qaba. Barbaachisu jilli hooggana ABOs irratti argamuu danda’a. WBOn Haal Duree qabsoo Oromoo milkeessuu qopheeffatee yoo sun guutamte qofa haasawatti seena.
(4) WBOn waan Hidhannoo hiikkachuu fi Kaampii murtaawootti akka 1992 sana galuu fudhachuu hin qabu. Yoo nagaa fedhan waggaa murtaawaaf WBOn naannawaa (region) bebbeekamaa Dhiha, Baha, Kaaba, Gidduu (Shawwaa), Kibbaa-Bahaa fi Kibbatti Dachee Oromiyaa beekamaa keessa tarsiimoo mataa isaan qubatee haala hordofuu qaba. Kaampiitti galanii marfamanii rukutamuu fi naannoo wareegamaan bilisoomsan gad dhiisanii kaampiitti rukutamuun daba Leencoo Lataa 1992n haa haftu!!
(5) WBOn haasaattis kan seenu yoo OPDOn sochii Amhaara ABN dhaan godhamuu fi Mootummaan Amhaaraa humna Addaa daangaa ceesisee jeequmsa gochaa jiru Mediatti bal’inaan balaaleffachuu fi mootummaan Federaalaa tarkaanfii jara jeeqxota Oromiyaa irratti yoo fudhatee dha. Diina Oromoo nyaachuuf gamu waliin hojjechaa akka isaan Oromiyaa jeeqan hayyamaa waliin haasawuun hin danda’amtu!
SHIRA SUURAA KANATTI MAXXANE IRRAA MUL’ATU:
Akka Odeeffannoo qulqulluu qabnutti hooggana ABO keessaa ti kan jedhamu Obbo Ibsaa Nagawoo dhalootaan nama Shawwaa kan ta’e erga Finfinnee seenee KAAYYOO ABO ganee dhoksaadhaan OPDO waliin hojjetaa jiraachuu dha. Hoogganni ABOs kana bira gaheera. Garuu sochii hojii isaa daangessaa hordoffii ABO jala jira.
Ibsaa Nagawoo qabsoo irras hin turre. Biyya alaa jiraataa ture. Sochii Diasporaa keessatti hooggana ABOtti filame malee hadh’aa fi wareegama dantaa qabsoon feesiftu takkaa dhandamee fi qaama godhatee hin beeku. Namni kuni erga Finfinnee galee hooggana ABO dhiisee dhoksaan OPDO waliin hojjetaa yoona gahe. FARRA WBO isa guddicha. Akka WBOn hiikkatee faca’ee fi kan adabamu adabamee dhabamu nama barbaaduu fi OPDOn muudamuu nama barbaadu, nama dantaa MAALLAQAAn bololaa ta’e akka ta’e miseensotni ABO itti dhihoo jiran nuuf mirkaneessaniiru.
Keessattu Ibsaa Nagawoo gandummaatti amanuu dhaan namicha diina ABO ta’e kan Taayyee Danda’aa jedhamu waliinii fi Jawar, Baqqalaa fi Bayyanaa Sanbatoo waliin hojjeta. Namoota OPDO alaa galan akka Dajanee Guutamaa, Garasuu Tufaa, Dr Brihanemesqel fi Dammaqaa Nagaasaa fi Hayiluu Gonfaa waliin dhoksaan ABO dhabamsiisuuf nama keessa ABO taa’ee hojjetaa jiru LUKKEE diinaa kan seera ABOn gaafatamuu qabuu dha.
Ammas xaxaa maqaa walitti dhufiinsa OPDO, KFO fi ABO jedhuun kan deemaa jiran Taayyee Danda’aa fi Ibsaa Nagawoo ta’uun mirkanaawaa dha.
Hoogganni #ABO fi #WBO namicha kana irraa of eeggachuu fi akka inni akka qaama hooggana ABOtti hin sossoone gochuu, fi yoo sosso’es irraa fudhachuu dhiisuun waajiba.
Hoogganni ABO namicha Ibsaa Nagawoo jedhamu diina keessaa kana irratti hamma KORA SABAA itti aanutti mirtii MISEENSUMMAA HOOGGANAA ABO Rarraasuu/ Mulquu dabarsee LABSUU qaba.
Yoo hoogganni ABO kana irraa of qusates, WBOs akka namichi Diaspora keessa roora’aa bahe kuni isa hin gurguratneef sochii namicha kanaa hordofee tarkaanfii gantuuf malu irratti fudhachuu qaba. Ofii du’anii diina hin jiraachisani!!
Sa’aatii kanatti hoogganaa ABO tokko addatti baasuun olola kan irratti qopheessan kaadiroota OPDO dha.
Profile namoota ABO deeggaran fakkaatanitti fayyadamuun olola oomishame facaasaa jiru.
Kun akkaataa itti ABO caccabsuuf jecha ololan dha. ABOn ololtootaaf bakka hin qabu. Ta’us taatee kana akka salphaatti ilaallee bira hin dabarru. Madda isaallee bira geenyee jirra.
ABO kan dorgomuu dandeessan diiguun osoo hin taane akka dhaabaatti of yaaduun gaafa as baatan qofa.
Ololli maafiyaa kamuu ammaaf gatii akka hin qabne ibsina. Hooggansi ABO hojiitti malee ololatti hin jiru.
Warri oduu akkanaa odeessitan kisaaraa keessan lakkaawwadhaatii kan biroon yaalaan dhaamsa jabduu dha.
ABOn rakkoo keessoo yoo qabaate caasaa fi sirna jiruun keessoo isaatti dhaaba fixatu malee kan as bahee wal irratti ololu miti. Gadaan sun warra akka qakkeetti tufaman waliin bahee awwaalamee jira.
OBN Caamsaa 05, 2011 – Marii Addaa https://t.co/XRTRsuMf3h pic.twitter.com/3tI7ZtNTfi
— Kichuu (@kichuu24) May 13, 2019
ONN LIVE | MAY 14 2019 ሰሞኑን በአማራ እና በቤኒሻሃንጉል ክልል አካባቢ በተፈጠረው ሁኔታ ላይ ከአቶ ኣላምረው ይረዳው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ሊቀመንበር ፡ ከአቶ መርቅኔ አዙቤር የቤኒሻጉል ህዝብ ንቅናቄ ለሰላም እና ዲሞክራሲ ድረጅት ሊቀመንበር እና ከአቶ ፍቃዱ መስፍን የአገው ብሔራዊ ሸንጎ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ጋር የተደረገ ውይይት የመጨረሻ ክፍል ። ONN LIVE Youtube https://youtu.be/uTbg2YxTYPY
mohamed tuke says:
Yaada bareeda,garuu maqaa nama dhuunfaa yaamanii jechoota hammeenyaa(arrbsoo of keessaa qabu) dubbachuun sirrii natti hin fakkaatu.